Apple ID သည် Apple ID မှတစ်ဆင့် web login တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple သည် Apple ID မှတစ်ဆင့် web login တစ်ခုလုပ်နိုင်သည်
iOS update အသစ်ကိုလာမည့်နွေ ဦး တွင်ရောက်ရှိမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် beta များသည် developer များထံဆက်လက်ရောက်ရှိနေပြီးအလုပ်သည် application အားလုံးကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ကြီးလေးသောတိုးတက်မှုများကိုမျှော်လင့်မထားသော်လည်းအနည်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်အဆင့်တွင် Apple သည်နည်းလမ်းသစ်ကိုတိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ID ကျေးဇူးကြောင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်.
ကုဒ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ် iOS 11.3 - ဤအရာသည်အိုင်ဖုန်းနှင့် iPad အတွက်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်း၏နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သောအသစ်ထုတ်ဝေမှုအတွက်အလုပ်လုပ်သောနာမည်ကြီး developer Guilherme Rambo ဖြစ်သည်။ 9to5macSecureChannel ဟုခေါ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် ၎င်းသည်အသုံးပြုသူများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည် သင်၏ Apple ID ကိုပေးခြင်းဖြင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ရှုပါ.
ဒီလှုပ်ရှားမှုကအသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုခင်ဗျားတွေ့ပြီ တစ်ခုထက်ပိုသောအင်တာနက်အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကသင်၏အကောင့်များ (ဂူဂဲလ်၊ တွစ်တာသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) ကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးအပ်ရန်မှတ်ပုံတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။။ သင့်အားဥပမာတစ်ခုပေးရန် RSS Reader Feedly ငါတို့ပြောတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်။ သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည့်အတိုင်းအခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များကိုအခြားအကောင့်များ၌သိမ်းထားပြီးသောဒေတာများကိုသာခွင့်ပြုခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်။
အခုသံသယဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် အက်ပဲလ်ဟာစစ်မှန်တဲ့နာမည်နဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသာခွင့်ပြုလိမ့်မယ်ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမအကြိမ်မီးလောင်ကျွမ်းနေသောသုံးစွဲသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းအစားသည်မလွယ်ကူပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Guilherme Rambo က၎င်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည် Apple TV မှအကောင့်တစ်ခုအောက်ရှိတီဗီ application များတွင် authentication system ကိုသုံးသည် လော့ဂ်အင်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲ သင်၏ Apple ID ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူနိုင်ရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple သည် Apple ID မှတစ်ဆင့် web login တစ်ခုလုပ်နိုင်သည်
Apple သည် iPhone7နှင့်7Plus အားပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအပိုင်း၌စတင်ရောင်းချသည်
27.000 mAh နှင့်အလွန်သတိထားဒီဇိုင်း။ ဒါက Power Bank Xtorm Infinite USB C ပါ